Reddit inharaunda yenzanga, ine subreddits iwe yausingatendi yaivapo izvo zvinopa kune zvese zvinodikanwa, chishuwo, uye kufarira. Nepo mazhinji enharaunda idzi achiyerwa, unogona kuita kuti maonero ako azivikanwe nemhinduro uye neimwe mhinduro kuti ubatsire kutungamira posvo, nemhinduro dzakanakisa dzichive dzakakurumbira.
Imwe yemhando dzakanakisa dzemhinduro ndeyeReddit karma, iyo inobatsira kusimudzira makomendi nezvakatumirwa, pamwe nekubatsira vashandisi kuwana kuzivikanwa. Chii chinonzi Reddit Karma chaizvo? Sezvauchaona mune ino nhungamiro, Reddit karma izita rako, rakavakirwa pamisana yemipiro yaunoita. Hezvino zvese zvaunoda kuti uzive.
Chii chinonzi Reddit Karma?
Paunotumira posvo nyowani kana kutaura paReddit, vashandisi vanozokwanisa kusimudzira kana kuiviga nekukwiridzira kana kudzikisira zvirimo. Imwe neimwe reddit tambo kana komendi inotanga neine poindi imwechete - iyi ndiyo yakazara karma yakapihwa kune iyo posvo.
Kana vamwe vashandisi veReddit vasingazvifarire, vanogona kuzvidzikisira, kudzikisira karma kunongedzera kumamaki asina kunaka pazasi zero. Kana vamwe vashandisi veReddit vachida iyo posvo kana chirevo, zvisinei, saka vanogona kuzvikwidziridza, vachizvipa kuruzhinji. Kana iyo posvo ikaenda nehutachiona ine yakakwana karma yakasungirirwa, saka inogona kutomboisundira iyo kuReddit peji rekutanga.
Iri ndiro simba reReddit muchiito. Karma ndiyo huwandu hwemapoinzi akawanikwa kuburikidza nezvakataurwa nezvakatumirwa muReddit kune mamwe maredredits akasiyana. Ndihwo mukurumbira wako, uchibvumira vamwe vashandisi veReddit kuti vaone kana iwe wakamira zvakanaka papuratifomu, kana kuti kana iwe uri mutambi anotora chikamu, mushandisi mutsva zvachose, kana mutsotsi akazara.
Kana iwe uchipa mukurumbira, saka yako Reddit karma ichave yakakwira, asi posvo ine njodzi kana maviri anogona kusundira karma yako pasi. Iwe haugone kuwana karma nekungotumira kana kupindura, asi kana iwe uri kunyora zvinobatsira, zvinonakidza, kana zvine hungwaru zvinyorwa mune zvakakurumbira subreddits, ipapo iwe uchakurumidza kupihwa mubairo nemipiro yako nevamwe vashandisi.
Reddit Karma Inodiwa here?
Reddit karma haina kunyatso kudikanwa, asi inobatsira kuongorora yakaderera-mhando mipiro uye vashandisi kubva kune subreddits. Semuenzaniso, kana wakambo mumvuri wakarambidzwa kubva kuReddit, zvingangove zvichikonzerwa nenhamba dzinoverengeka dzekutuka kana kugumbura maposta- mapostori angadai akavhoterwa pasi nevamwe vashandisi nechikonzero chimwe chete ichocho.
Mamwe maredredits zvakare anoshandisa iyo karma system kubatsira screen skrini uye zvirevo otomatiki. Kana iwe uine account nyowani, hauzove uine yakawanda yekarma mamaki. Dzimwe subreddits dzinokutadzisa iwe kutumira matsva matsva kana makomendi kunze kwekunge iwe ukavaka iyi zvibodzwa kumwe kunhu kuburikidza neyakajairika Reddit mipiro.
Kana iwe uchida kuenda kure paReddit, iwe unofanirwa kucherechedza yako Reddit karma, zvirinani nguva imwe neimwe mune imwe nguva. Karma yakaderera pamaakaunzi akare zvinoreva kuti kutonga kunoitwa nema subreddit mamoderita nezve chinangwa chako - chakarurama kana kwete.
Reddit ipuratifomu yemunhu wese, saka kunyangwe kana usine hanya neReddit karma, uye usazvinetsere kutarisa ziso rako rekarma, unogona kunge uchimanikidzwa kubata nemhedzisiro kana mamaki ako akadonha zvakanyanya.
Maitiro Ekutora Karma paReddit
Kugamuchira Reddit karma zvachose pasi pekunaka kwevamwe vashandisi. Kana ako makomendi nezvakatumirwa zvakagamuchirwa zvakanaka, vamwe vashandisi vanogona kukusimudzira. Mavhoti kubva kune vamwe vashandisi anowedzera poindi kune yako yakazara karma yakazara, iyo yaunogona kuona muprofita yako.
Iwe haugone kunyepera yako yakazara, uye vazhinji vashandisi veReddit vachakwanisa kuona kuyedza kuburitsa kufarira (uye nekudaro karma) kuburikidza nenhema kana spammy zvinyorwa. Nzira yakanakisa yekuvaka yako karma mamaki paReddit ndeyechokwadi uye inosanganisa nharaunda yauri kutora chikamu.
Dzimwe subreddits dzinozivikanwa nekuve ine yakanyanya isina kunaka mushandisi base, saka tonga mipiro yako nokungwarira. Kutumira zvinokakavara kana zvisina kunaka zvirevo zvinounza mhinduro, iyo inowanzo kuve inosanganisirwa nemavhoti uye kuderedzwa kweako karma mamaki.
Kuona Yako Reddit Karma Chikamu
Kana iwe uchida kuramba uine ziso pane yako Reddit karma mamaki, saka pane akatiwandei maitiro aungaite izvozvo. Kutarisa nekukurumidza mukona yepamusoro-kurudyi yeiyo Reddit hwindo (kana iwe uchinge wasainira mukati) inokurega iwe uone yako yazvino Reddit karma mamaki seyakazara.
Iwe unogona zvakare kuona yako Reddit karma mamaki pane yako Reddit mushandisi purogiramu. Unogona kuwana izvi kubva kune yako mushandisi URL zvakananga (semuenzaniso, reddit.com/u/user). Neimwe nzira, iwe unogona kuwana yako mbiri kana iwe uchinge wasainira mukati nekusarudza zita rako reReddit kumusoro-kurudyi, wobva wasarudza iyo My Profile kuita.
Yako Reddit karma mamaki anozoratidzwa mupaneru kurudyi, padyo nezuva rekucherechedza reReddit account kunyoreswa (inozivikanwa seyako Reddit keke zuva).
Iyo Reddit karma mamaki aimbove akapatsanurwa kuita post karma uye komenda karma mune yekare Reddit interface. Mune iyo nyowani yeReddit interface, zvisinei, iwe unongoona zvako posvo uye nekutaura karma yakasanganiswa seimwe yakazara zvibodzwa.
Kana iwe uchida kuziva kuti zviyero zvakaparadzaniswa, iwe uchafanirwa kudzokera kumashure kune yekare Reddit interface. Kuti uite izvi, shanya old.reddit.com/user/username, kuchinja Username ine zita rako rekushandisa reReddit. Neimwe nzira, sarudza zita rako rekushandisa mukona yepamusoro-kurudyi yeiyo Reddit interface, wobva wasarudza iyo Shanyira Old Reddit kuita.
Mune yekare Reddit interface, sarudza zita rako rekushandisa mukona yepamusoro-kurudyi. Izvi zvinounza iwe kune yako mushandisi chimiro, uko ako akapatsanurwa Reddit karma mamaki anozoratidzwa mune ipaneru kurudyi-ruoko.
Maitiro Ekukwiridzira uye Downvote paReddit
Kana iwe uchida kupa karma kune vashandisi vanotumira kana kutaura paReddit, saka unogona kuzviita nekushandisa iyo yekusimudza system. Pamberi pese posvo uye nekutaura paReddit iseti yemiseve inonongedza kumusoro uye kuzasi.
Kusarudza museve wekumusoro uchasimudzira chirevo icho, chero bedzi iwe uchinge wasainira mukati mako. Kune matsva matsva eReddit, izvi zvinoreva kuti yekutanga poster inowana imwe karma poindi. Izvi zvinogona kusazvikurumidza kuzvimisikidza, zvisinei, sekushandisa kweReddit vhoti inopenga kufukidza mamaki ekuvandudza kuchengetedza iyo system kubva mukubiridzira.
Kana iwe ukafunga kukwidziridza chirevo, mupomeri anowana kukwidziridzwa (uye iyo karma poindi semhedzisiro). Saizvozvo, kana iwe ukafunga kudzora pasi kana kupomhodza, poindi imwechete ichatorwa kubva kune iyo mushandisi karma yakazara.
Izvi zvinoona kuti muyero wesimba unogara munharaunda. Kana iwe nevamwe vashandisi veReddit mukaona yakashata-yemashoko kana kutumira, unogona kuzvidzora. Kamwe kana chirevo kana posvo zvadzikisirwa pazasi pe zero, ichatanga kuvanzwa kubva pakuonekwa.
Kuvaka Mbiri Yako paReddit
Ukangotanga kuvaka yako Reddit karma, unenge wave munzira yako yekuve pro Reddit mushandisi uye uchizopa kuzviuru zvemadredititi anowanikwa kuti iwe utarise nekutumira mukati. Kana iwe usingakwanise kuwana iyo subreddit yaunoda, edza kushandisa Reddit yekumberi yekutsvaga maficha kukubatsira kuti uwane nzira yako.
Kana iwe uchida kutora zvinhu nhanho kumberi, iwe unogona Nyorera kuReddit Premium (yaimbova Reddit Goridhe) uye tambidza super karma negoridhe, sirivheri, uye mubairo weplatinum. Usazvidya moyo kana ukarasikirwa nechido, nekuti wakasununguka kuzviita bvisa yako Reddit account chero nguva, asi gadzirira kurasikirwa ne karma yako kana uchidaro.
10 Reddit Matipi uye Matipi ekukubatsira iwe kuve nyanzvi Redditor
Quora uye Reddit: Simba dzimba dzeSEO uye kushambadzira muna 2021
GoPro's Karma Drone Zvino Kudzoka Pakutengesa; Yakakanganisika Latch Latch Yakagadzirwazve
ReddPlanet yakasarudzika-yakagadzirirwa yemahara reddit mutengi ye Windows 10